ထိုင်ပေမြို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်သီးသန့်ကဏ္ဍမြန်မာဘာသာ-ပြင်းထန်သောအထူးကူးစက်ကပ်ရောဂါအဆုတ်ရောင် (COVID-19 အတိုကောက်ဝူဟန့် အဆုတ်ရောင်) ဇုန်-ထိုင်ပေမြို့ကျောင်းဝင်းသင်ကြားရေးနှင့်နေထိုင်မှုဘဝလမ်းညွှန်ချက်များ (C/9-1)
ထိုင်ပေမြို့ကျောင်းဝင်းသင်ကြားရေးနှင့်နေထိုင်မှုဘဝလမ်းညွှန်ချက်များ (C/9-1)
(1)ဓါတုပစ္စည်းများ၊မျှဝေအသုံးပြုသည့်ကိရိယာများကိုအသုံးမပြုမီစနစ်တကျပိုးသတ်သင့်သည်။
(2)မတ်စ်ခ်မတပ်နိုင်သောကျောင်းသားများ：ကျောင်းသားများအားဝေဒနာခံစားမှုကို တဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးစေသောနည်းလမ်းဖြင့်လမ်းညွှန်ပါ၊မတ်စ်ခ်ဝတ်ဆင်ခြင်းအလေ့အထကိုတဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်ပါ၊အဆင်မပြေမှုသက်သာစေရန်သိုင်းကြိုးအမျိုးအစားညှိပါ(သို့)နားချိတ်ချိတ်ပါ၊(သို့)ညှိနှိုင်းမှုချိတ်ကိုသုံးပါ။
(1)အမြင်အာရုံချို့တဲ့သောကျောင်းသားများအတွက်အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးနည်းဗျူဟာ：ဖတ်စာအုပ်များ၏စာသားပါအီလက်ထရောနစ်ဖိုင်များကိုကြိုတင်ပေးပါ၊မျက်မမြင်စာဖတ် ရန်ကိရိယာများကိုသုံး၍ဖတ်ပါ၊ဖတ်စာအုပ်၏အကြောင်းအရာကိုနားထောင်ပါ(သို့)အီလက်ထရောနစ်ဖိုင်များကိုချဲ့ပါ။
(2)အကြားအာရုံချို့တဲ့သောကျောင်းသားများအတွက်အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးနည်းဗျူဟာ：အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတင်ပြမှုတွင်ဗီဒီယိုကိုစာတန်းထိုးများဖြင့်ပါသင့်သည်၊ ပါးစပ်ကြည်လင်နေစေရန်မှန်ဘီလူးကိုဖွင့်ထားသင့်သည်၊ပုံမှန်စကားပြောနှုန်း၊စကားလုံး စုစည်းမှု(သို့)အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတင်ပြမှုတွင်ဗီဒီယိုကိုစာတန်းထိုးများဖြင့် ပါသင့်သည်။
မူကြိုကလေးများအစာစားပြီးနောက်သွားများသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း：ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သွားပိုးစားခြင်းဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်ငယ်စဉ်ကတည်းကသွားများသန့်ရှင်းရေးအလေ့အကျင့်ကိုမွေးမြူသင့်သည်။ကပ်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နှင့်သန့်ရှင်းရေးပညာပေးဟန်ချက်အရသွားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါ။
*ရှေ့စာပိုဒ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင်အခက်အခဲများရှိပါကကျောင်းတက်ရက်တွင် ကိုယ်ပိုင်ရေကျက်အေးဖြင့်ပလုတ်ကျင်းရန်မိဘများ၏သဘောတူညီချက်ရယူရန်အကြံပြုသည်။သွားပိုးစားခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပါ၊အိမ်တွင်ညစာစားပြီးနောက်သွားနှင့်ခံတွင်းသွားပိုးစားခြင်းဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်တိကျသေချာပြီးပြည့်စုံသောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကိုကူညီဆောင်ရွက်ရန်မိဘများအားတောင်းဆိုပါ။
2. 110ခုနှစ်9လ30ရက်မတိုင်မီပြင်ပသင်ကြားရေးအစီအစဉ်များကိုရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပြီးကပ် ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်၍နောက်ဆက်တွဲကိုညှိလိမ့်မည်။
4. ကျေးဇူးပြု၍「ကူးစက်ရောဂါခွင့်ရက်」ကို2ပတ်ကြာကာလလို့ယူပြီးအတန်းတက် မှတ်တမ်းမှာမပါဝင်ပါဘူး။
သတငျးအခကျြအလကျ update ကို：2021-09-09 10:33